मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिदा किन बचाउको लागि प्रधानमन्त्री ओली अघि सरिहाल्छन् – Hamrosandesh.com
प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले बालुवाटारमै बसेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । अस्पतालबाट फर्केपछि उनले एकपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे । त्यसपछि उनी के गर्दैछन् ? कोरोनाबाट त्रस्त जनताका लागि कस्ता योजना बनाउँदैछन् ? भन्ने आमजनताले देख्न र सुन्न पाएका छैनन् ।
ओलीले त्यसो भनेको केही समयपछि नेपालमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भए । ओली क्याबिनेटकै चर्चित मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिए। वाइडबडी खरिद काण्ड होस् कि यती ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा सित्तैमा दिएको काण्ड होस् । मेलम्ची आयोजनाका ठेकेदारसँग मन्त्रीले २५ करोड घुस मागेको काण्ड होस् वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको काण्ड होस् सबैमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रीहरु जोडिएका छन् ।